Factory Waxyaabaha Factory - Shiinaha Waxyaabaha soosaarayaasha, Shirkado
Istaarj wax laga beddelay
Tilmaamaha farsamada ee sheyga istaaritka wax laga badalay Waxyaabaha halbeega istaarijka> 80% (qoyan) Waxyaabaha biyaha ≦ 10% Dambaska ash Ash 6% Waxyaabaha borotiinka ah ≦ 0.3% Qiimaha PH 5-7 shaashadda Fiican 0.2mm shaashadda godka laba jibbaaran, ≦ 4% Raac waxqabadka Qallalan iyo isku darka kulul I, qoyan iyo isku dhafka kulul I-III
Halbeegga farsamada ee wakiilka xumbaynaya sheyga sheyga waxtarka leh Waxyaabaha falcelinta leh> 35% qiimaha PH 7-99 maadada saliida leh ee muhiimka ah ≧ 1.8% maadada sodium sulfate ≦ 2.0% Sodium chloride ≦ 0.1% Bar daruur leh <10, Cufnaanta 1.02g / cm³ dhererka xumbo ≧ 180mm
Dib udhac Gesso
Wakiilka Yaraynta Biyaha
Waraaqdan dhejiska ah ee loo yaqaan 'Edging paper paper' waxaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo guddiga 'gypsum'. Waad qaabeyn kartaa shirkaddaada oo aad noo soo diri kartaa sawirka, naqshadeeyeheenna ayaa sameyn doona oo dib kuu xaqiijin doona.
Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'polyvinyl acetate emulsion', waxaa laga soo saaray Vinyl acetate-ethylene, polyhol akohol iyo polymerization polymer kale oo polymeris ah. Marka la barbardhigo badeecadaha kale ee ku dhasha, way fududahay in la maareeyo, dhaqso loo adkeeyo, waxaa fiican in la isku xidho oo aan dab la shidin iwm.
Wakiilka xumbada Gypsum Board: waxaa loo isticmaalaa xumbada xumbada ee geeddi socodka warqada dusha sare ee wax soo saarka guddiga.
Waraaq-cawl-waji / Deegaanka u roon / Miisaan khafiif / U adkeysi-qoyaan / dabacsanaan
Waqtiga dirida: 15 maalmood gudahood kadib bixinta lacagtaada